ဒီတစ်ပါတ် “ရင်ဖွင့် နားစွင့် ပန်းတိုင်ဆီရွက်လွှင့်” အစီအစဉ်မှာတော့ ဒေါင်းက အမျို… – PVTV Myanmar
·7months ago ·24 Comments
ဒီတစ်ပါတ် “ရင်ဖွင့် နားစွင့် ပန်းတိုင်ဆီရွက်လွှင့်” အစီအစဉ်မှာတော့ ဒေါင်းက အမျိုးသမီး၊ လူငယ်နှင့် ကလေးသူငယ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နော်စူစန်နာလှလှစိုး နဲ့ တွေ့ဆုံပြီး ပြည်သူတွေသိချင်နေတဲ့ မေးခွန်းအချို့ကို မေးမြန်းပေးထားတာ ခံစားနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ “ရင်ဖွင့် နားစွင့် ပန်းတိုင်ဆီရွက်လွှင့်” အစီအစဉ်ကို အပတ်စဉ် စနေနေ့တိုင်းမှာ ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး PVTV ရဲ့ Channel များဖြစ်တဲ့ www.facebook.com/pvtvmyanmar, www.youtube.com/pvtvmyanmar နဲ့ Mizzima, DVB ရုပ်သံလိုင်းတို့မှာလဲ ဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်။
Like – 23K Share – 2979
ဒါတွေဟာ အာဏာရှင်တွေရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကြောင့်ဖြစိလာခဲ့ရတွေပါ
သူတို့မှာ “ငါ” တလုံးဘဲရှိတယ်
ဒီလိုကောင်တွေကို ဘယ်တော့မှ အရှုံးမပေးဘူး
USမှာ လှုလို့ရမဲ့အသင်းအဖွဲ့လေးသိချင်ပါတယ်..page or phone number. .
Daung should join Myanmar Politics , he is very mature and politically conscious.
Yadanar Phyo says:
2021-06-26 at 9:34 PM
လေစား ဂုဏ် ယူပါတယ် ရှင့်
နိုင်ငံအရေး ဆွေးနွေးမေမြန်းပေးသူကော ဖြေပေးသူကော ကျန်းမာချမ်းသာ ဘေးကင်းစွာ နဲ့ အရေးတော်ပုံအောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ
2021-06-26 at 9:42 PM
Thanksalot Ko Daung lay
2021-06-26 at 9:51 PM
Respect for your activities.
2021-06-26 at 10:16 PM
Thithi Aye says:
Su Naing Aung says:
စစ် အာဏာရှင်စနစ် ကို ဘက်ပေါင်းစုံက
တော်လှန်ပေးနေတဲ့ CRPH , NUG
တာဝန်ရှိသူများနဲ့ တကွ အနုပညာရှင်
မောင်နှမ များ အားလုံးကို လေးစားမိပါတယ်
စွဲကပ်နေတဲ့ အိုင်းအနာ ကြီး တစ်ခုလိုပါပဲ
အရှင်း ပျောက်ကင်းဖို့ အသက်တွေ ဘဝတွေ အများကြီး ပေးဆပ်ရဦးမယ်
အားလုံး စည်းလုံးညီညွတ်စွာ တော်လှန်မှ
* တိုင်းရင်းသား ညီအကို တွေ စည်းလုံးပါ
* ဘာသာကြီးလေးမျိုး ညီညွတ်ပါ
* စစ် အာဏာရှင်စနစ်အမြန်ကျဆုံးပါစေ
* အရေးတော်ပုံအောင်ကို အောင်ရမည်
2021-06-26 at 11:33 PM
2021-06-27 at 7:19 AM
မဂၤလာပါ ေဒါင္း က်န္းမာပါေစ
Yee Yee Hlaing says:
2021-06-27 at 12:04 PM
ကိုဗစ် outbreaks မဖြစ်ခင်၊ဝင်ငွေပြတ်လို့ အငတ်ဘေးကြီး မဆိုက်ခင်၊ကိုယ်စုထားတာလေးတွေ ခိုးဆိုးလုယက်ခြင်းမခံရခင်
Saw Shwe Ngwe says:
2021-06-27 at 5:31 PM
လေးစားပါတယ် အကို​ရော ဆရာမရော အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်
Angel Nyein says:
ဘဝတွေရင်းထားရတဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်း မှတ်တမ်းတင်ရန် မမေ့ဖို့ ပြောချင်ပါတယ်။
Khin Hnin Aung says:
2021-06-28 at 12:03 PM
ဦးေလၾကီ ဦးေလၾကီ says:
2021-06-30 at 7:12 PM
Mi Lae Lae says:
ကျေးဇူးအထူးတင်နေရပါတယ် ဆရာမ နဲ့ သားလေး’ဒေါင်း’ တို့ရှင်*
2021-07-03 at 6:23 PM